January 28, 2018 – Kalika Khabar
वास्तविकता कि कथा?
January 28, 2018 January 28, 2018 adminLeaveaComment on वास्तविकता कि कथा?
२०७४ माघ १४ काठमाडौं । चिसो मौसम एका बिहानै सडक किनारामा अन्डा बेच्न बसिरहेका एक गरिब वृद्धमाथी मेरो नजर पर्यो, उनी बिरामि जस्तो देखिन्थे त्यतिकैमा एकजना मेडम आफ्नो कारबाट ओर्लेर ती वृद्ध अन्डा बिक्रेतालाई सोधिन – तपाइले अन्डा कसरी बेच्नु भयको छ ? अन्डा बिक्रेताले जवाफ दिय रु-५ प्रती अन्डा मेडम ! मेडमले बिक्रेतासङ्ग भनिन […]
January 28, 2018 adminLeaveaComment on दिल्लिले २२ लाखमा किन्यो सन्दिपलाइ आइ पि एल खेल्न!!
२०७४ माघ १४ काठमाडौं । युवा बलर सन्दिप लामिछानेलाई आई पी एल खेल्न दिल्लीले किन्यो। सन्दिप लामिछाने नेपाली बलर हुन। आईपीएल टिममा आवद्ध भएर खेल्ने उनी पहिलो नेपाली क्रिकेटर हुन् । १३ गते भएको अक्सनमा दिल्लीले नेपाली क्रिकेटर सन्दिपलाई किनेको हो । सन्दिप मात्र १७ बर्ष पुगेका छन। दिल्लिले उनको न्यूनतम मूल्य २० लाख भारु […]
मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा मिल्यो: बाम कार्यदल
January 28, 2018 January 28, 2018 adminLeaveaComment on मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा मिल्यो: बाम कार्यदल
२०७४ माघ १४ काठमाडौं । एमाले र माओवादीको सयुक्त कार्यदलले ६ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डाको टुंगो लगाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच झण्डै चार घन्टा छलफल भएपछि कार्यदलले प्रदेशको प्रमुख पदहरुको भागबन्डा गरेको छ। कार्यदलमा ४ मुख्यमन्त्री र ४ सभामुख अनि २ उपसभामुख एमालेले लिने सहमति भएको छ […]
बाम कार्यदलको बैठक बस्दै, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख छान्ने!
January 28, 2018 adminLeaveaComment on बाम कार्यदलको बैठक बस्दै, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख छान्ने!
२०७४ माघ १४ काठमाडौं । ६ मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदका सभामुख तथा उपसभामुखको टुंगो लगाउन आज आइतबार वाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यदल बैठक बस्ने भएको छ । राष्ट्रियसभाको सिट संख्या टुंगो लगाएपछि कार्यदलले प्रदेश सरकारमा कुल प्रदेश सांसद संख्याको १० प्रतिशतमात्र मन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो । एमाले, माओबादी कार्यदलले मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रालयको बाँडफाँट […]
प्रतिगामी तत्वहरुले एकता विरुद्ध एमाले, माओबादी नेताहरुलाइ नै उचाले: प्रचण्ड
January 28, 2018 adminLeaveaComment on प्रतिगामी तत्वहरुले एकता विरुद्ध एमाले, माओबादी नेताहरुलाइ नै उचाले: प्रचण्ड
२०७४ माघ १४ चितवन । १३ माघ, चितवन । माघ १३ गते सनिवार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन चितवनको आठौं जिल्ला सम्मेलनको उदघाटन कार्यक्रममा प्रचण्ड ले भने `जनताले पार्टी एकतालाइ स्वगत गरिसकेको छ, हामीले ढिला गरेर हुदैन। कम्युनिस्ट एकताको विकल्प पनि छैन!´ अध्यक्ष प्रचण्डले अग्रगामी तत्वहरुले पार्टी एकताविरुद्ध एमाले र माओवादीकै नेताहरु लाई उक्साएको बताएका […]